Dowladda Itoobiya iyo Jabhadda ONLF oo Wada hadal Rasmi ah uga Furmay Magaalada Nairobi – Kismaayo24 News Agency
Dowladda Itoobiya iyo Jabhadda ONLF oo Wada hadal Rasmi ah uga Furmay Magaalada Nairobi
by admin 11th February 2018 0110
Magaalada Nairobi waxaa maanta ka furmay Wada Hadal Rasmi ah oo u dhaxeeeya Dowladda itobiya iyo Jabhadda Xoreynta soomali galbeed ee ONLF waxaana wada hadallada garwadeyn ka ah dowladda kenya.
Itoobiya waxaa shirkaan ku matalaya mas’uuliyiin uu ka mid yahay hogaamiyaha dowlad deegaanka soomalida itoobiya Cabdi maxamad Cumar halka ONLF ay shirka ku matalayan mas’uuliyiin dhowr ah oo Jabahadda hogaamiyeyaasheeda kamid ah.
Jabahadda ONLF ayaa muddo ku dhaw 40 sano dagaal kula jirta dowladda Itoobiya waxaana xusid mudan in itoobiya ay gacanta ku heyso in kabadan 5,000 oo xubnaha ONLF ah kuwaasi oo ku jira xabsiyada dalka itoobiya mas’uulkii ugu dambeeyay ee itoobiya u gacan gala wuxuu ahaay c/kariim qalbi dhagax oo dowladdda soomalia ay ku wareejisay itoobiya.
War Cusub: Magaalada Kismaayo oo Lala Mataaneynaayo Magaallo Qurux Badan oo Dalka Turkiga ku taal. ( Magaceed?)
Sawirro: Thabit Cabdi oo Turkiga ku booqday Bukaanada uu Caafimaad ah ugu soo qaaday Turkiga markuu xilka haayay
TOP NEWS: Madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo maanta magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda…..
Tifaftiraha K24 11th April 2017
Daawo Sawirro: Taliyaha Laanta Socdaalka iyo Jinsiyadaha General Koofi oo Kismaayo lagu soo dhaweeyay Muxuuse Halkaasi u tagay???
Tifaftiraha K24 7th November 2016
Wafdi ka socda dowladda oo gaaray Magaalada Balad Xaawo.